स्ट्रङ्गेस्ट ओम्यानका प्रस्ट कुरा | KhelkudNews.com
1. रत्नजित दोश्रो चरणमा नङ्गशल र अमिताको जोडी क्वाटरमा 2. मनाङ मस्र्याङीको विजय यात्रा जारी 3. ललीतपुर र काठमाडौंको जित 4. सोतोकानको बेल्ट ग्रेड सम्पन्न 5. नेपाली ब्याडमिन्टन टोली बंगलादेश प्रस्थान
स्ट्रङ्गेस्ट ओम्यानका प्रस्ट कुरा
Published on March 7, 2016, by Manoj Shiama - Posted in 0
म्याग्दीको हिस्तान गावीस । त्यसै गावीसको विच बजारबाट दुइ घन्टा परे पुगे पछि एउटा सानो बस्ती छ । नेपालको आम बस्ती जस्तै मथीनी, त्यो ठाउँको नाम । खेती, किसानी, गाइ, भैसी र बाख्रा जिवनको साथ । २५ सय मिटरको यो उचाइमा धान होइन, आलु , फापर र कोदो लगायत खाद्य पदार्थकै खेती हुन्छ । आम नेपाली भने पछि सामान्य बुझीने कुरा हो, अन्य जस्तै दुख मेलो गरेर जिवीकोर्पाजन गर्ने बिरु पुन र दिलमाया पुनको परिवार थियो । विरु पुनका पाच सन्तान चार त गोठमा जन्मीए । कान्छी छोरी, समग्र सन्तानमध्यकी चौथौ तारा देवी पुन नेपालकी बलियी महिला बनेकी छिन् । यो ताज पहिरिएको धेरै बर्ष भयो । सायद त्यो मथिनी गाउँमा बाल्यकालको गरेको दुख र काठमाडौको भारोत्तलन प्रशिक्षण केन्द्र प्रबेश पछिको दुवै दुखले उनमा यत्ति धेरै शक्ति दीयो की सायद सन्याषको घोषणा नगरेसम्म तारादेवी नै नेपालको बलियी महिला बनीरहने छिन् ।
१२ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जिते पछि म्याग्दीमा सम्मान थापेर काठमाडौ फर्कीएकी तारालाई त्यही सम्मानको क्रममा बाल्यकाल देखिका सबैै दिन फ्लायसब्याकको रुपमा आउनु स्वभाबिक थियो । टीकोट माबीमा प्डदा चकचके स्वभाब थियो, उनको । यो कुरा ५० को दशकको तीरको हो । कागजको डल्लो देखे पनि भलीबल जस्तो ठानेर खेल्ने,मोजाको डल्लो पारेर पनि भकुण्डो हीर्काइ हाल्ने । त्यसो त म्याग्दीमा भलीबल खेल्ने चलन पहिलो दखि नै थियो । उनी पनि लागीन् भलीबल खेल्न । वडाबाट हिस्तान गावीसको टोलीमा ठाउँ पाइ हालीन् । हिस्तानबाट जिल्ला छनोट खेल्न बनी आइन् । उनलाई यादछ, भरत शाह, हंसराज वाग्ले र जितेन्द्र चन्द पनि बेनी पुगेका थिए । छनोट गर्न । उनको भलीबल यात्राले ग्याग्दीको घेरा ताडेर अघि बढी हाल्यो । पश्चिमाञ्चल छनोटका लागि दमौली ुगीन् । पोखरा एक देढ महिना विताइन् प्रशिक्षणको दौरान । सोझी तारा देवी खेलको यी सबै संरचना बुझ्ने भइसकेकी थिइन् । उनको हातको बल उठाउने कला सबैले मन पराउन थाले । उनी त्यसको लगत्तै पश्चिमाञ्चल टोलीको प्रतिनिधीत्व गर्दै चौथो राष्ट्रिय खेलकुद खेल्न भ्याइन् । २०५४ मा चौथो राष्ट्रिय खेलकुद ,नेपालगञ्जमा आयोजना भयो । । भलीबल सुर्खेतमा भएको थियो । उनी लीफट्र भएको टोली पहिलो भयो । फेरी म्याग्दी फर्काइ । कुटो,कोदालो, खेती र किसानी अनी स्कुल उनको दैनन्दीनी । बिहान उठेर सोतर सार्ने डोको र किताब दुवै साथमा । गोठमा चाहीने सोतर सोरेर कतै राख्ने स्कुलबाट फर्कदा लीएर आउने । तारादेवीका अधीक दिन यसैगरी विते ।
आठौ दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमा भयो । यसका लागि उनी हकदार थिइन् । काठमाडौ केन्द्रित खेलकुद सञ्चारले म्याग्दीकी यी सोझी तारासम्म खबर पुगेन । साग सकिए पछि खबर पुग्यो । उनको अन्तराष्ट्रिय पदक पाउने हक त गुम्यो । तर, मिहनेतको फल, १७ बर्ष पछि फेरी त्यो अबसरलाई उपयोग गरिन ्। भलीबल नभइ भारोत्तलन मार्फत ।
अर्को ठूलो प्रतियोगिता पनि उनका लागि उपयोगी भएन । पाचौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि काठमाडौ आइन् । काठमाडौ आएकै दिन शाही परिवारमा दुर्घटना भयो । राष्ट्रिय खेलकुद भएन । तारा फेरी लागीन्, म्याग्दी । यस पछि ताराको यात्रा मोडीएको थियो । एसएलसी दिए पछि उनी काठमाडौ आइन् । २०५८ पुषको कुरा थियो ।
अन्तराष्ट्रिय पदक जित्ने पहिलो नेपाली महिला प्रमिला थापासंग उनको भेट भयो । प्रमिलाले भारोत्तलन खेल्न भनीन् । उर, तारालाई यस खेलको बारे अत्तोपत्तो थिएन । प्रमिलाको सल्लाह अनुसार नै गइन्, त्रीपुश्ेवरको भारोत्तलन प्रशिक्षण केन्द्रमा सुनील लाल जोशीलाई भेट्न । सुनीलसंग कुरा भए पछि उनले उ त्यो कोठामा गएर मिठु गुरु( पार्थ सारथी सेन गुप्त)लाई भेट्न भने । गुरुले राजेन्द्र प्रधानलाई भेटाए ।
त्यहा महिलाका लागि छुट्टै रड थिएन । केटाहरुले प्रयोग गर्ने २० केजीको रडबाट यो प्रशिक्षण सुरु भयो । ४० केजी उनले उठाइन् । गाउँमा भारी बोकेर हुर्केको बलिष्ठ ज्यान त्यहाँ त उनलाई कुनै कठिनाइ महशुष भएन । २६ पुषको यो दिन उनको नया यात्राको सुरुवाती पाइला थियो । २७ पुषमा सार्वजनिक विदा २८ पुषयमा त उनलाई जिउ देखेर हैरानी नै भएको थियो ।
उनलाई स्न्याच र क्लीन एन्डजर्कको बारे केही थाहा थिएन । विस्तारै बुझीन् । प्रशिक्षण्मा ब्यस्त रहीन् । दुइ महिना पछि विरगञ्जमा खुला महिला भारोत्तलन प्रतियोगिता भयो । त्यहीबाट उपाधि हात पारे पछि एक दिन पछि सबै पत्रीकामा आफ्नो तस्बिर देखिन्, । यसैबाट उनको मनर्मा खेलकुदको महत्व बढ्न थाल्यो । २८ चैत २०५८ उनको खेल जिवनको पहिलो प्रतियोगिता । ६३ केजीबाट राष्ट्रिय कीर्तिमना राख्न सुरु । पहिलो प्रतियोगितमा ९५ केजी भारबाट उनको भारोत्तलन जिवनको सुरुवात थियो । पछि जगदीस प्रधान पनि उनका प्रशिक्षक भए । काठमाडौ जिल्लाबाट बि.स २०६० सम्म सहभागिता जनाइन् । बि.स २०६० माघमा उनी प्रहरी जवानको रुपमा भर्ना भइन् । नेपाल पुलिस क्लबकी यी खेलाडीको यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण पाटो बनेर त्यो विभाग पनि बस्न पुग्यो । केही समय मिसनमा विदेशीएको समयमा झन्ट कटुवाल स्ट्रङ्गगेस्ट महिला बन्न पुगिन्। नत्र १४ बर्षे भारोत्तलन जिवनमा अनेकौ कीर्तिमान, र उपाधिका साग लगातार अघि बढी रहिन् ।
समय फेरीएको छ । विगतको दैनन्नदीनी अहिले छैन । विगत मष्तिष्कमा ताजै छ । त्यसै कारण त उनी सामान्य नेपाली देख्ने वित्तिकै उसको दुख बुझ्छीन् । दाजु कृष्ण पुन सेनामा । अर्का दाजु बुद्धीमान पुन विदेशमा । भाइ पनि विदेशमा । आमाका ख्याल राख्ने र खेल जिवन अगाडी बढाउने संगै लगेकी छिन् ।
कम अन्तराष्ट्रिय सहभागिता उनको गुनासोको विषय हुने नै भयो । एक पटक जुनियर वल्र्ड च्याम्पियनसीप नेपालमा हुने भनीएको थियो । तर, भएन । सागमा पनि यो भन्दा अघि महिला भारोत्तलन थिएन । उनको मन त नरोएको त होइन । १३ ÷१४ बर्ष पाच अन्तराष्ट्रिय खेलमा पहिलो पदक पाइन् । दुखका बाबजुद गुरुहरुले गर्ने माया, विभागमा पाएको सम्माजनक ब्यबहार र कमाएको नाममा उनी खुसी नै हुन्थीन् ।
समय धेरै कोल्टे फेरिएको छ । उनको म्याग्दी पर्यटकीय ठाउँ हो । अरु जिल्ला भन्दा कम छैन । म्याग्दी खुला दिसा मुक्त जिल्ला बनेको छ । सञ्चार, यातायात र शिक्षाको सुबीधा पनि छ । तर, पनि आफ्नो विगत नभुल्ने उनको बिशेषता हो । आम नेपाली दुख गरेर नै स्टार खेलाडी हुन्छन् भन्ने तथ्य पनि थाहा छ । त्यसकारण यसै खेलमा लागेर आफ्नो ठाउँ, अझ भनौ आफू जस्तै सामान्य नेपालीका लागि केही गर्न चाहना छ । नेपाल पुलिस क्लबले यो प्लेटफर्म दिलाइदिएकको कारण यहाँको जिम्मेवारीमा समर्पीत त हुनै प¥यो । यसका अलावा खेल र समाज दुवै प्रतिको जिम्मेवारी बोध त उनमा छदैछ ।